Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Eberechi Eze Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu
Edemede anyị nyere gị akụkọ banyere Eberechi Eze Childhood Akụkọ, Eziokwu Biography, Ezinụ Ezinaụlọ, Ndị nne na nna, Ndụ mbụ, ibi ndụ, enyi nwanyị, Ndụ nkeonwe na ihe ndị ọzọ ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo mgbe amara ya nke ọma.
Ndụ na ebili nke Eberechi Eze. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ụdị egwu ya na ike ọrụ ya. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle ụdị Eberechi Eze anyị nke Bio nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a, na-ebughị ụzọ, ka anyị bido.
Eberechi Eze Nwatakiri Akuko:
Eberechi Oluchi Eze a mụrụ na 29th ụbọchị nke June 1998 na Greenwich n'ógbè South East London, England.
Ọ bụ otu n'ime ụmụaka 3 amụrụ site na nne na nna ndị amachaghị banyere oge itinye ndụ ya.
Site na ebe amụrụ ya na agba ya, Eze bụ Anglo-Africa nke agbụrụ Eastern-Nigeria na agbụrụ.
dị nnọọ ka Chris Smalling, ndị ezinụlọ ha abụọ n'otu mpaghara London. Eze Eberechi toro n’otu uzo ya na umu nne ya abua - Chima na Ikechi - ndi nwere ike buru okenye ma obu okenye.
A mụrụ Eberechi Eze na-eto eto n'isi obodo London.
N'ịbụ onye tolitere n'otu n'ime ụlọ ndị dịdebere ụlọ ọgwụ ochie Greenwich na isi obodo England, Eze bụ nwata bụ nwata na-egwu egwuregwu nke na-egwu bọọlụ dị ka egwuregwu nwata maka egwuregwu na agbanahụ ihe kpatara ya.
Iji bido ụzọ mgbapụ, ebe ezinụlọ Eberechi Eze biri na ebe o toro abụghị ebe dị mma- enweghị ekele maka ndị omekome.
Ọ bụ naanị ebe ndị nne na nna si obodo Nigeria kwabatara ibi ndụ mgbe ha kwagara England ọtụtụ afọ tupu a mụọ ya.
Dika ndi ozo dika ndi si na Naijiria, ndi nne na nna Eze so na ndi nkiti.
Amaghi otutu ihe banyere ndi nne na nna Eberechi Eze n’oge itinye ndu a. Ebe E Si Nweta Foto: ClipArtStudio
Dika odi, Eze enweghi otutu umuaka nke umuaka ya. Ka o sina dị, ọ na-eji obi ụtọ achọta ihe jikọrọ ya na ụmụaka site n'iji okpukpe soro ha na-egwu bọl na ohere ọ bụla enyere.
Eberechi Eze's Education and Career Buildup:
Ebe izizi nke ụmụaka ihe egwuregwu ahụ na ndị ọgbọ ya na-agakarị ma ha gụsịrị akwụkwọ bụ ọdụ egwuregwu dị nso ebe ha ga-egwu bọl ogologo ruo mgbe ndị mụrụ ha bịara kpọọ ha.
Onye na - eme egwuregwu n'oge ahụ na - esoro ndị enyi ya egwu egwuregwu mgbe ha gụsịrị akwụkwọ. Ebe E Si Nweta: Pinterest.
Mgbe Eze nọ na ya, ọ maara na ọ na-amụta nka bara uru na egwuregwu nke nwere ike imere ya aha. Ọ nọkwa na nche maka ohere nke ịmalite ụlọ ọrụ siri ike na ụlọ akwụkwọ egwuregwu ọ bụla ama ama.
Eberechi Eze Biography - Afọ ndị mbụ na Football:
Mgbe oge ruru, Eze bidoro ọzụzụ na sistemụ ndị ntorobịa nke Arsenal mana ewepụtara ya n'afọ 2011 n'ihi na klọb ndị London ahụghị obere 13 afọ ahụ dị ka atụmanya na-egbuke egbuke.
Mgbe Arsenal jụrụ ya, ha nakweere Eddie Nketiah, onye ọzọ jụrụ ajụjụ site na Chelsea onye ha chere na ọ ka mma.
Ọjụjụ ọ na-ewute ya, mana ọ gaghị egbochi ya. Dika aturu anya, ndi nne na nna na ndi ezinulo Eberechi Eze gbaliri ike ha niile inyere Eze aka inwe isi ike n’oge a.
Ọ bụ ezie na ndọrọ ego ahụ mere Eze obi nwute ruo nwa oge, o buliri onwe ya elu wee hụ ebe ọ dị na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Fulham ebe ọ malitere ịmalite ịgba bọl ọzọ.
Ọrụ ndị na-esote n'oge gara aga hụrụ Eze ka ọ nwetara ọnwa 4 na Reading FC tupu ya abanye na Millwall FC dị ka 16 afọ na 2014.
Foto a na - adịghị ahụkebe nke ọ na-egwu maka Millwall FC
Eberechi Eze Biography - Road To Fame Story:
You maara na a tọhapụrụ Eze na Millwall FC naanị mgbe ọ chere na ọdịnihu ya na klọb na-aga n'ụzọ ziri ezi.
Ọzọkwa, nke a jọgburu onwe ya bụ ihe ijuanya na nkụda mmụọ nye nwata. Nwa ọ bụla na-eto eto nke dịrị ndụ site na ịhapụ ya ọ bụghị naanị otu ugboro mana ugboro abụọ ga-ama nke ọma ihe mgbu miri emi ọ nwere ike ịkpata.
N'ịgbasapụ ihe ịtụnanya ya na Millwall, Eze ji mwute gosi ndị mụrụ ya na ndị ezinụlọ ya na ọ ga-akwụsị ịgba bọl. Ọ tụgharịrị n'uche ịnwe ọrụ nwa oge na Tesco yana iji gaa n'ihu na agụmakwụkwọ ya na kọleji mana n'oge na-adịghị anya ọ nwetara oku iji sonyere Queens Park Rangers (QPR).
Maka ọ theụ nke onwe ya, ndị nne na nna na ndị ezinụlọ, QPR ghọrọ isi iyi nke nkasi obi nye eziokwu ya nwere nsogbu. Otu Eze dị afọ 18 nabatara ohere igwu egwu ọzọ site na itinye aka na nkwekọrịta mbụ ya na klọb na August 2016.
N'aka nke ha, QPR nyere Eze ohere iji gosipụta amamihe ya na ịzụlite nka ya gụnyere iziga ya na Wycombe Wanderers na mbinye ego na 2017.
Eberechi Eze Biography - Rise To Fame Story:
Mgbe emechara Eze otu afọ, ọ kpọbatara ya na klọb nna ya ebe ọ mere nke ọma ịchebe ọnọdụ ya dị ka nku.
Ngwa ngwa rue afọ 2020, Eze bụ winger onye njikwa QPR wuru ndị otu ya gburugburu.
Onye winger ahụ nwere obi ụtọ na QPR ebe ọ bara uru nye ndị otu ahụ. Onyonyo: ESPN.
Onye egwuregwu bọọlụ nke Naịjirịa ebidoghi nso na ekwere maka ịgbalị maka ya ụmụ nwoke kachasị nwee ike ịgba bọl. Otú ọ dị, ọ na-agagharị na ịghọ otu n'ime nkwa ndị mara mma England na-agba bọl.
Ọganihu dị ugbu a na radar nke ndị otu kachasị na Europe ebe England na Nigeria na-agakwa ịkwado mbinye aka ya maka ọrụ mba ụwa. Nigeria nwere olile anya karịa na nwa nwoke ahụ ga-egwu maka Super Eagles.
Nke a gụnyere ịgbaso ụzọ nke ndị egwuregwu bọọlụ England dịka Sone Aluko, Victor Moses, Shola Ameobi, Alex Iwobi na Ola Aina.
Nwaanyị Eberechi Eze - ọ bụ di na nwunye ma ọ bụ di na nwunye?
Ga n'ihu na Eze Eberechi hụrụ ndụ n'anya, anyị enweghị ike ikwu n'ụzọ zuru ezu na ọ lụbeghị di. Nke a bụ n'ihi eziokwu ahụ na foto abụọ na winger's Instagram page na-egosi na o nwere obere enyi nwanyị ama ama.
Nwanyị nwanyị Eze Eberechi adịghị ka onye nwere mgbọrọgwụ n'Africa kama ọ na-akụ ndị agbụrụ egwuregwu dịka egwuregwu zuru oke maka winger ahụ mara mma. Anyị nwere olile anya na duo na-akpachi anya ma nwee nnukwu atụmatụ maka ọdịnihu.
Foto mara mma nke Eberechi Eze na obere enyi nwanyị ya a ma ama. Ebe e si nweta ya: Instagram.
Ezinulo bu akwa nke njem Eze na football site na nwata rue oge. N’akụkụ a, anyị ga-amụnyekwu ọkụ nne na nna Eberechi Eze na ndị ezi na ụlọ ya.
Banyere Nna na Nne Eberechi Eze:
Eze ekwuputala na ọ bụ ndị mụrụ ya bụ ndị Naịjirịa mana anyị maara na ha bụ ndị egwuregwu bọọlụ na ndị nne na nna na-akwado ha. N'ezie, ọkpọ ahụ toro nne ya maka ịkasi ya obi mgbe a chụpụrụ ya n'ụlọ akwụkwọ Arsenal n'esepụghị aka.
N'aka nke ọzọ, Federation of Nigeria - na ngwụcha 2019 - kwuru na ha na nna na nne Eze na-ekwurịta maka ịchekwa mbinye aka ya maka ọrụ ebumnuche. Mkparịta ụka a na-ekwu ọtụtụ ihe gbasara nnabata nne na nna Eze na ọrụ ya.
Banyere ụmụnne na nwanne ikwu Eberechi Eze:
A mara winger nwere nwanne abụọ. Ha bu umunne ya Ikechi na Chima. Ikechi bu onye n’agba egwu n’egwuregwu bọọlụ nke Braintree Town (dika n’April 2020). N'aka nke ya, Chima yiri Eze. O nwere mmasị na ejiji na ịzụ ahịa n'ịntanetị.
Eberechi Eze ya na ụmụnne ya ndị nwanyị Ikechi (n'aka ekpe) na Chima (n'aka nri). Ebe e si nweta ya: Instagram.
Site na ndu ezinulo Eze, amaghi otutu ihe banyere nna nna ya na ezinulo ya dika ha na ndi nna nna ya.
N’otu aka ahụ, enweghị ndekọ banyere nwanne nna Eze, nwanne nna nna ya na ụmụ nwanne nne ya ebe amabeghị ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya.
Eberechi Eze wezuga onwe ya site n'àgwà ya, nwere àgwà ndị mara mma nke gụnyere nsonye, ​​ọgụgụ isi nke uche na ọchị.
Na mgbakwunye, ọ maara otu esi edozi oke ọchịchọ na ezi echiche.
Onye na-atụ egwu nke akara Zodiac bụ akara Ọrịa anaghị ekpughe nkọwa gbasara nke onwe ya na nke onwe ya.
Ihe ndị mejupụtara ya na ihe omume ntụrụndụ ya gụnyere ikiri ihe nkiri, ịge egwu, igwu egwuregwu vidio na iso ndị ezinụlọ na ndị enyi nọrịa.
Lee otu n'ime ndị ọgụgụ isi egwuregwu bọọlụ ole na ole na-atọ ụtọ egwu n'emechighị anya ha. Isi mmalite: Instagram.
Banyere otu Eze Eberechi si eme ma na-emefu ego ya, o nwere ego ruru nde $ 1 na ide ihe a. Na-enye onyinye maka ụgbụ onye winger gụnyere ụgwọ na ụgwọ ọ na-enweta maka ịgba bọọlụ nke otu.
Ọ dị ihe karịrị nde $ 1 (nde 2020) na-ede ihe ndu a. Onyonyo: Instagram na Photofunia.
Na mgbakwunye, nkwenye na ụdị dịka Adidas na-eme ọtụtụ ihe iji bulie akụnụba Eze. Dị ka nke a, ọ bụghị onye ọbịa nke ihe ụtọ nke ndụ gụnyere ịgụgharị n'okporo ámá ndị London na ụgbọala ndị mara mma yana ibi na ezigbo ụlọ.
Eberechi Eze Eziokwu:
Iji mechie ndụ Eberechi Eze anyị, ihe ndị amachaghị ma ọ bụ gbasara eziokwu gbasara winger.
Eziokwu # 1 - Nkwụ ụgwọ Salagwọ:
Na 3rd nke August 2016, onye na - aga n'ihu bịanyere aka na QPR, nke hụrụ ya ka ọ na - enweta ụgwọ ọnwa buru ibu nke 273,000 313,051 (XNUMX Euro) kwa afọ. Gbagide ụgwọ ọnwa ya n'ọnụ ọgụgụ pere mpe, ọ pụtara na ọ na-enweta ihe ndị a.
Kwa Afọ: £ 273,000 € 313,051
Ọnwa kwa: £ 22,750 € 26,088
Kwa Izu: £ 5,291 € 6,067
Kwa :bọchị: £ 756 € 867
Kwa elekere: £ 32 € 36
Nkeji nkeji: £ 0.53 € 0.6
Sekọnd: £ 0.008 € 0.01
Eberechi Eze Salary agbaji
Nke a bụ ihe EBERECHI EZE eritela uru kemgbe ị malitere ile Peeji a.
Ị maara?… Nwa amaala UK nke na-akpata £ 2,830 kwa ọnwa ọ ga - adị mkpa iji rụọ ọrụ ọnwa 8 iji kpata £ 22,750 nke bụ ego ahụ Eze na-enweta n’otu ọnwa.
Eze nwere asọpụrụ FIFA n'ogo 75. Odi nkenke a di nwa oge site na itolite na ezi udi nke ukwu nke winger na-egosi n’oge a. Dika odi, odi oge obula tupu ndi ihe nchu ohu hu Eze mezuru ikike ya.
N'enweghị obi abụọ ọ bụla, ọkwa SoFIFA nke Eberechi Eze (FIFA 20 Figures) gosipụtara ya n'akụkụ ndị ama ama- amasị Samuel Chukwueze, Boubakary Somare na Curtis Jones bụ ndị egwuregwu maka ọdịnihu.
Okwesiri ikwu na nke a bu mmalite di ala ya.
Onye winger ka ga ahapu ihe ogugu banyere ma obu onye kwere ekwe ma obu na o bughi. Kaosiladị, nsogbu a na-amasị ndị nne na nna Eberechi Eze zụlitere ya ịbụ onye kwere ekwe nke na-ekpe Kristian. Okpukpe a dị iche iche na ntinye nke Igbo nke South East Nigeria ebe Eze nwere ezinụlọ ya.
Eziokwu # 3 - Anu ulo:
Dị ka ọtụtụ ndị na-ahụ maka ịgba bọl, Eze bụ nnukwu na idobe anu ulo karịsịa nkịta. O nwere nkịta na-enweghị ụdị nke ọ na-ewerekarị foto kwesịrị ekwesị nke Instagram maka ndị fan iji nwee mmasị na ya. Lee otu n'ime foto mara mma dị n'okpuru.
Biko kpọtụrụ onye ọkpụkpọ ma ọ bụ klọb nne na nna ya oge ọ bụla ị hụrụ ebe nkịta dị warara na-eche na nke a na London. IG.
Eziokwu # 4- Tattoos:
Eze enweghị egbugbu ma ọ bụ nka - n'oge a - n'ihi na ọ na-ahụ ha dị ka mgbakwunye na-enweghị isi. Ọ na - arụ ọrụ ọfụma ịnwe ezigbo anụ ụlọ nke dị n 'ogo ya dị 5 ụkwụ na 8 sentimita asatọ.
Eziokwu # 5 Trivia:
Imaara na afọ a mụrụ Eze - 1998 bụ ihe amụrụ maka ịbụ afọ nke etinyere igwe nchọta Google? N'ebe ntụrụndụ, 1998 hụrụ ịhapụ ihe nkiri ndị ama ama dịka Titanic na Saving Private Ryan.
Offọdụ n'ime mmalite na mwepụta nke mere 1998 afọ dị mma. Google na IMDB.
Iji zọọ akụkọ ndụ anyị, anyị ga-ewetara gị wiki Eberechi Eze. Tebụl a ga - enyere gị aka ị nweta ozi dị nkenke banyere ndị ịgba ọsọ bọọlụ.
Aha n'uju: Eberechi Oluchi Eze.
Ụbọchị ọmụmụ: 29 June 1998 (afọ 21).
Ebe amụrụ onye: Greenwich, England.
Ndị nne na nna: Mr na Mrs Eze.
Ụmụnne: Ikechi na Chima (nwanne).
Ezinụlọ Mmalite / mgbọrọgwụ: Nigerianmụ Naijiria.
Agụmakwụkwọ Bọọlụ: Millwall.
elu: 5 ft 8 na (1.73 m).
Ikike nke FIFA: 83 (FIFA 20).
Ihe data Wiki Eze Eberechi
Nyochaa: Daalụ maka iwepụta oge were gụọ akwụkwọ anyị bụ nke Eberechi Eze akụkọ nwata -agụnye nke ya eziokwu banyere ndu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị.
Akwụkwọ akụkọ QPR
Ọ dị mma ịhụ nwatakịrị ahụ ka ọ mezuo ikike ya. Onye ọkpụkpọ kachasị elu iji lezie anya.
Bright Osayi-Samuel Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ